Daawo : C/raxmaan C/shakuur oo xaqiijiyay inuu isku day dil ah ka badbaaday+(Xog Muhiim ah) - Xigasho.net | Xigasho.net
Daawo : C/raxmaan C/shakuur oo xaqiijiyay inuu isku day dil ah ka badbaaday+(Xog Muhiim ah)
Dec 23, 2017 - jawaab
Siyaasiga Mucaaradka ah C/raxmaan C/shakuur oo maanta shir jiraa’id ku qabtay Hooyga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay ee dhawaan lagu weeraray ayaa ka sheekeeyay qaabka uu u dhacay Weerarka lagu soo qaaday iyo khasaaraha ka dhashay iyo waxa ka danbeeyay markii weerarka uu idlaaday.
C/raxmaan C/shakuur oo garbihiisa ay taagnaayeen Xubno ka tirsan Xisbiga Wadajir ayaa sheegay in xilli saqdhexe ciidamada Nabad sugida ay ku soo qaadeen weerar aan wadan dignii,islamarkaana hortiisa lagu laayay Ciidamadii ilaalada u ahaa.
Wuxuu sheegay in marka Albaabka lagu soo jabiyay,islamarkaana waxay laayeen Ciidamada ilaalada guriga,ka dibna aynu garaaceen gaarayaal dhashiiko ah bam iyo Qaraxyo.
Ciidamada naloo soo diray waxay wateen amar ah in nala dilo ama nala soo xiro,waxayna ujeedkooda ugu muhiim uu ahaa in nagula qaarijiyo.
C/raxmaan Shakuur ayaa sheegay in mas’uuliyada weerarka ay leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya.
Halkaan Hoose Ka Daawo:
© 2017 Xigasho.net - All rights reserved.